Green Land Service: April 2013
Green Land Service
အခမဲ့ မြန်မာ Ebook Dowload ဒေါင်းလုပ် (၀တ္ထုများစုစည်းမှု)
Download Myanmar Ebook ဒေါင်းလုပ် နည်း : မိမိဆွဲလိုရာ စာအုပ်(ebooks)များ ၏ Link ကို ကလစ်နှိပ်ပီး
မြန်မာEbook ၀တ္ထုများ စုစည်းမှု ............
ရေးသားတင်ဆက်သူ Hopeless Soul at 8:51 PM 46 comments:
Labels: Ebooksစုစည်းမှု, Free Ebooks, မြန်မာEbooks
ရေအောက်အတွင်းဖောက်လုပ်ထားသော Oresund Bridge
ဒီတံတားကြီးက ဆွီဒင် နိုင်ငံနဲ့ ဒိန်းမတ်နိုင်ငံကြား ဖောက်လုပ်ထားတဲ့တံတားကြီးဖြစ်ပါတယ်။ အပေါ်စီးကနေ ကြည့်မယ်ဆိုရင် တံတားက ဆက်မနေဘဲ တစ်ဝက်တစ်ပျက်ဖြစ်နေပါတယ်။ အမြင်နဲ့ကြည့်ရင်တော့ဘယ်လို ဆက်သွားမလဲပေါ့ ။ဒါပေ့မယ့် သူက
တစ်ဝက်တစ်ပျက်မဟုတ်ပါဘူး။ ရေအောက်ထဲကနေပြီးတော့ တံတားကို ဆက်ဆောက်ထားပါတယ်။ အလယ်ရေလမ်းမှာ ပင်လယ်ကူး သဘောင်္တွေ သွားလို့ လွယ်ကူအောင်ပါ။ ဒီတံတားကြီးကို ၁၉၉၁ ခုနှစ်က တည်ဆောက်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ တံတားကြီးရဲ့ နာမည်ကတော့ Oresund Bridge ဖြစ်ပါတယ်။
ရေးသားတင်ဆက်သူ Hopeless Soul at 8:54 PM No comments:
ကာယဗလ-ကိုယ်အလှ ကျင့်နည်းစာအုပ် ebook
Credit to orginal uploader www.khtnetpc.webs.com
ရေးသားတင်ဆက်သူ Hopeless Soul at 7:45 PM No comments:
ထူးထူးခြားခြား ကားလမ်းမပေါ်မှ လေဆိပ်
ကားလမ်းမပေါ် ဖြတ်ပြီး တည်ဆောက်ထားသော လေဆိပ် အမှန်တကယ် ရှိပါတယ်။ တည်နေရာကတော့ လစ်ဘရိန်းပင်နီဆူလ ကျွန်းရဲ့
တောင်ဘက်စွန်း ရှိ ဗြိတိန်ပိုင် ကျွန်းမြို့ တစ်ခုဖြစ်တဲ့ Gibraltar ကျွန်းမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ Gibraltar လို့ အမည်ရတဲ့ ယင်းလေဆိပ်ဟာ Gibraltar ကနေ စပိန်နိုင်ငံသို့ ဖောက်လုပ်ထားတဲ့ အဝေးပြေး လမ်းမပေါ် ဖြတ်ပြီး တည်ဆောက်ထားပါတယ်။
လေယာဉ်ပြေးလမ်း အသုံးပြုတော့မယ် (တစ်နည်း) လေယာဉ်ပျံ
မိုးပေါ်ပျံ တက်တော့ မယ်ဆိုရင် ကားလမ်းမကြီးကို ယာယီ
ယင်းလေဆိပ်ကို ဒုတိယ ကမ္ဘာစစ်ကာလ ၁၉၃၉ ခုနှစ်က
ဲဗြိတိန်တော်ဝင်လေတပ်တို့ ကိုယ်တိုင်တည်ဆောက်ပြီး စတင်
အသုံးပြုခဲ့ပါ တယ်။ မြေပြင်ညီနေရာရှားပါးမှု၊ မြေနေရာ ရှာဖွေရမယ့် အခက်အခဲတွေကို ဖြေရှင်းဖို့အတွက် ယခုလို နည်းပညာနဲ့ စနစ်ကို အသုံးပြုလိုက်ခြင်း ဖြစ်ပါတယ်။
ယခုချိန်အထိလည်း ဗြိတိန်တော်ဝင်လေတပ်မှ အသုံးပြုဆဲဖြစ်ပြီး ခရီးသည်ပို့ဆောင်ရေး အတွက်လည်း အသုံးပြုပါတယ်။
Gibraltar Airport ဟာ ကမ္ဘာပေါ်မှာ အဝေးပြေးလမ်းမပေါ်ဖြတ်ပြီး တည်ဆောက်တဲ့ တစ်ခုတည်းသော လေယာဉ်ကွင်း ဖြစ်တယ်လို့ သိရပါတယ်။
ှုInternational news for myanmar
ရေးသားတင်ဆက်သူ Hopeless Soul at 7:39 PM No comments:
မျက်လှည့်ပြနည်း(၁၀၀) ဆရာစက္ကောမ ebook
Download - မျက်လှည့်ပြသနည်းပေါင်း 100 (စက္ကောမ)
သိမှတ်လေ့လာသင့်သော ကမ္ဘာ့အံဖွယ်(၇၇) ခု
ကမ္ဘာ့ အံ့ဖွယ်(၇)ခုကိုတော့တော်တော်များများသိရှိကြပါတယ်။ အခုတင်ပေးမှာက ကမ္ဘာ့ အံ့ဖွယ်(၇)ခုစာရင်းဝင်ဖို့ နိုင်ငံအသီးသီးက
တင်ပြကြတဲ့ စာရင်းပါ။ အဲဒီစာရင်းထဲကမှ မဲပေးပြီး နောက်ဆုံး ကမ္ဘာ့ အံ့ဖွယ်(၇)
ခုကိုရွေးချယ်ခဲ့ပါသည်။ အဆိုပြုခံရသော ကမ္ဘာ့ အံ့ဖွယ် (၇၇) ခု ၊ Nominees Top 77 for World Wonders
ရေးသားတင်ဆက်သူ Hopeless Soul at 7:36 PM No comments:
Labels: ဓာတ်ပုံ, အထူးအဆန်းဖြစ်ရပ်မှန်သတင်း
ဆူရှီ ကိုယ်တိုင် လုပ်ပီး စားသောက်ချင်သူတွေအတွက် နည်းလမ်းလေးပါ
(၁)ဝါးနဲ့ ယက်ထားတဲ့ ယင်းလိပ်
(၂)အနေတော် ချက်ထားတဲ့ ထမင်း
(၃)ဆုရှီလိတ်ဖို့ ဆီဝီလို့ခေါ်တဲ့ ရေညှိဖတ်
(၄)(အသုံးအများဆုံး)ဆုရှီထဲ ထည့်လိတ်မယ့် ခရက်မိ(Creab Meat)၊ ဆော်လမွန်ငါး၊ တူနာငါး၊ ငါးဥ၊ အသင့်ခြစ်ထားတဲ့ မုန်လာဥနီ (Carrot)၊ သခွားသီး၊ ထောပတ်သီးအမှည့်၊ ငါးရှဉ့်ကျတ်တိုက်၊ ကင်းမွန်၊ အသင့်လှော်ထားပြီးနှမ်း၊ ခရမ်ချိစ် (ကိုယ်နှစ်သက်ရာ)
(၅)ဆုရှီနဲ့ တွဲစားရတဲ့ ဂျင်း၊ ဝါဆာဘီ(wasabi )၊ နှင့် Soy Sauce ပဲငံပြာရည်
(၆) လိတ်ပြီးသား ဆုရှီဖြတ်ဖို့အတွက် အသွား အနည်းဆုံး (၈)လက်မလောက် ရှည်တဲ့ ဓါးတလက် လိုအပ်ပါတယ်။
ပထမဦးဆုံး ပြင်ဆင်မှုကတော့ ချက်ပြီးသားထမင်းပူပူကို ဆုရှီမှာသုံးတဲ့ Vinegar အနည်းငယ်နဲ့ သမအောင် မွှေပေးရတယ်။ ဒါမှ နူးညံ့ပြီးကောင်းမွန်တဲ့ ချဉ်ပြုံးနဲ့ အရသာရှိတဲ့ ဆုရှီကို ရရှိမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ထမင်းဖြူအစား Brown rice (လုံးတီးဆန်သို့မဟုတ် ) အသုံးပြုလည်း ရပါတယ်။ လုံးတီးဆန် ဆိုရင်တော့ Vinegar ရောစရာ မလိုပါဘူး။
ဒုတိယကတော့ ထမင်းလုံးတွေ လက်မှာ မကပ်အောင် ပလပ်စတစ်လက်စွပ်၊ ရေ သို့မဟုတ် ထောပတ်သီးနဲ့ လက်အိတ်ကို နည်းနည်းလေးသုတ်လိုက်ရင်တော့ လက်အိတ်မှာ ထမင်းလုံး မကပ်တော့ပါဘူး။ ဝါးနဲ့ ယက်ထားတဲ့ ယင်းလိပ်ကိုလည်း ပလပ်စတစ်နဲ့ လုံအောင်ပတ်၊ သခွားသီးနဲ့ ထောပတ်သီးကို ကို လက်သန်းလုံးလောက် အနေတော် လှီးပါ။ သခွားသီးကို အချောင်းလိုက် မသုံးချင်ရင်တော့ သဘောင်္ခြစ်နဲ့ ခြစ်လိုက်ရင်လည်း အဆင်ပြေပါတယ်။
(၁)ပထမဆုံး ယင်းလိပ်ပေါ်မှာ ဆီဝီကို အရင်ဆုံးခင်း။ ကြမ်းတဲ့ဖက်ကို အပေါ်ဘက်မှာထားပါ။
(၂)ထမင်းကြက်ဥနှစ်လုံးစာလောက်ကို ဆီဝီပေါ်မှာ လက်မနဲ့ လက်ညှိုးသုံးပြီး အသာလေး ပါးပါးလေးဖြန့်ပေးပါး နှမ်းဖြူး။ ပြီးရင် ထမင်းရှိတဲ့ဘက်ကို အောက်ကို လှန်ချလိုက်ပါ။
(၃)ထမင်းခရက်မိကို လက်ညှိုးတစ်ချောင်းစာအရွယ်လောက် ဆီဝီပေါ်ကို အရှည်လိုက် ဖြန့်ပေးပါ။ ထောပတ်သီးနဲ့ သခွားသီးကို ခရက်မိ ဘေးမှာ အသာလေး ကပ်ပေး။ ပြီးရင် ယင်းလိတ်သုံးပြီးတော့ အသာလေး ပုံမှာ ပြထားတဲ့အတိုင်း လိတ်လိုက်ပါ။ ဆုရှီတလိတ်ရပြီ ဆိုရင်တော့ ကိုယ်အဆင်ပြေသလို ဓါးနဲ့ ရှစ်ပိုင်း ဒါမှမဟုတ် ခြောက်ပိုင်းလောက် ဖြတ်ပြီး Soy sauce, ginger, wasabi နဲ့ အဆင်ပြေသလို သုံးဆောင်နိုင်ပါပြီ။
ဒါကတော့ ရိုးရိုးထမင်းနဲ့ လိတ်ထားတာပါ။
လုံးတီးဆန်နဲ့ လိတ်ထားတဲ့ ဆုရှီပါ။
သားသတ်လွတ်သမားတွေအတွက် Brown rice မုန်လာဥနီ၊ သခွားသီး၊ ထောပတ်သီးနဲ့ လိတ်ထားတဲ့ ဆုရှီပါ။
ရေးသားတင်ဆက်သူ Hopeless Soul at 7:32 PM No comments:
ရုရှားမှ ဆွဲဆောင်မှုအရှိဆုံး အမျိုးသမီး ဟက်ကာ
အသက်က ၂၄ နှစ်ပါ။ ခုတောင် ထောင်နန်းဆံနေပြီထင် ပါတယ်။ ထောင် ဒဏ် နှစ် ၄၀ တောင် အချခံရတယ်လို့ သိရပါတယ်။
ရုရှားဖွား အမေရိကန်ရောက် ဟက်ကာ ဖြစ်ပါတယ်။ ၁၉၈၉ ခုနှစ်ဖွားဖြစ်ပြီး ယနေ့မှာဆိုရင် အသက် ၂၄ နှစ်ပဲ ရှိပါအုံးမယ်။ သူက အွန်လိုင်းကနေ တရားမဝင် ငွေလွဲပေးတဲ့ Money Mule အလုပ်လုပ်ခဲ့တာပါ။ ကိုယ်တိုင်ကလည်း အမေရိကန်နိုင်ငံက ဘဏ်တွေကို ဖောက်ခဲ့ပါတယ်။
Password အမှားတွေရိုက်၊ Zeus (Trojan horse) တွေသွင်းပြီး ငွေတွေ ယူလို့ ကြိုးစားတာ အမေရိဒေါ်လာ ၃ သန်းတန်ဖိုးရှိပါတယ်။ သို့ပေမယ့် သူတကယ် အလကားရသွားတာက အမေရိကန်ဒေါ်လာ ၃သောင်းခွဲ ပါ။ ဘဝ တစ်လျှောက်ကလည်း Money Mule အလုပ်မှာ Percentage နဲ့ ရပါတယ်။
မိသားစု ဆင်းရဲပြီး မိခင်တစ်ဦးတည်းရှိပါတယ်။ နယူးယောက်တက္ကသိုလ် တက်ပြီး Programming ကိုတော့ အပြင်မှာ သင်တာ ဖြစ်ပါတယ်။ ငွေ အလကားရတဲ့ နည်းလမ်းဆိုတော့ လုပ်ရင်းနဲ့ တစ်နေ့တော့ မိပါလေရော၊ မိတဲ့ အချိန်မှာ Money Mule လုပ်ငန်းနဲ့ တရားမဝင်ငွေ အလွဲအပို့လုပ်ထား တာ အတော်လေးများနေပါပြီ။ ဒါကြောင့် အမှုကြီးသွားခြင်း ဖြစ်ပါတယ်။
ထောင်ဒဏ်လည်းများ ဒဏ်ငွေလည်း များပါတယ်။ http://vk.com/svechinskaya_k ဒါကတော့ သူ့ရဲ့  Social account စာမျက်နှာလေးပါ။ သူမဟာ ယနေ့တိုင် ကမ္ဘာ့စွဲဆောင်မှုအရှိဆုံး (The World Sexiest Model) အဖြစ် အသိအမှတ်ပြု ခံထားရကြောင်း သိရပါတယ်။
ရေးသားတင်ဆက်သူ Hopeless Soul at 7:25 PM No comments:
Cue Club Full version(PC game) ဘိလိယက်သမားများအတွက်
ဘိလိယက်ဂိမ်းချစ်သူများအတွက် တင်ပေးလိုက်ပါတယ်....PC အတွက်ဖြစ်ပါတယ်...အရမ်းဆော့လို့လန်းတဲ့ ဂိမ်းပါ...နှစ်သက်သူများ အခမဲ့ ဒေါင်းလုပ်ဆွဲနိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာ..ဒီgame ရဲ့ အသေးစိပ်အကြောင်းအရာကိုတော့မပြောပြတော့ပါဘူးအောက်မှာ ဒေါင်းလုပ်ဆွဲနိုင်ပါတယ်
ရေးသားတင်ဆက်သူ Hopeless Soul at 7:09 PM No comments:
Labels: PC Games Software
ခရီးသွား အင်္ဂလိပ်စကားပြော(သင်းသင်းနိုင်) Ebook
Download - ခရီးသွား အင်္ဂလိပ်စကားပြော(သင်းသင်းနိုင်)
ရေးသားတင်ဆက်သူ Hopeless Soul at 7:06 PM 1 comment:
Lead Guitar တီးခတ်နည်း(P.Morgan) ebook
ရေးသားတင်ဆက်သူ Hopeless Soul at 6:59 PM No comments:
Rock ဂစ်တာတီးနည်း(ညီညီထွေး) မြန်မာလို ebook
To download : ညီညီထွေး Rock ဂစ်တာတီးနည်း
ရေးသားတင်ဆက်သူ Hopeless Soul at 6:54 PM No comments:
အဆင့်မြင့် လိဒ်ဂစ်တာတီးခတ်နည်း(ခိုင်ကျော်) ebook
Download _ ခိုင်ကျော် လိဒ်ဂစ်တာတီးခတ်နည်း
ရေးသားတင်ဆက်သူ Hopeless Soul at 6:51 PM No comments:
Credit : burmeseclassic.com
Download Zippshare - Thai speaking book
Download Mediafire - Thai speaking book
ရေးသားတင်ဆက်သူ Hopeless Soul at 6:43 PM No comments:
အလွယ်ဆုံး ငါးဘာသာစကားပြောနည်း ebook
Credit to Orginal Uploader refer to above photo.
Download - ငါးဘာသာ စကားပြော စာအုပ်
ရေးသားတင်ဆက်သူ Hopeless Soul at 6:35 PM No comments:
ဘက်ထရီလည်းခံ ဖုန်းလိုင်းလည်း မြန်စေသည့် app
ရေးသားတင်ဆက်သူ Hopeless Soul at 6:27 PM No comments:
ဂီတသမားများ တေးရေးသမားများအတွက် မရှိမဖြစ် အဖော်မွန် စာအုပ်
credit to www.khtnetpc.webs.com
Download - keys and chord စာအုပ်- အလိမ္မာ
ရေးသားတင်ဆက်သူ Hopeless Soul at 6:24 PM No comments:
နေ့စဉ်သုံး အင်္ဂလိပ် စကားပြော စုစည်းမှု ebook
Download - လူပြောအများဆုံး စကားပြော စုစည်းမှုစာအုပ်
ရေးသားတင်ဆက်သူ Hopeless Soul at 6:21 PM No comments:
How to Hack facebook acc password
Every Body Question About how can i hackfacebook? why doesn't my phisher work? how can i send my phisher?...
This isastep by step tutorial for face-book accounts.
1)Go to "www.facebook.com/login.php" and right click on some white space on the page and press "view source code". ALOT of text is gonna appear, copy it all to notepad.
2)Now we need to changeafew things in the code. So that the login button sends the info to our file instead of the facebook login. We do that by editing the action of the code. So press ctrl+f and search "action=" without the quotes. you should find this
The big red ring that circles the action= you have to change. You have to change it to 'action="next.php" '. after you have done that, you should change the method (small red circle on the picture) to "get" instead of "post", or else it will not work. Save the document asindex.html................
ရေးသားတင်ဆက်သူ Hopeless Soul at 8:47 PM No comments:
Labels: Hacking Tut
Arduino : A Quick Start Guide ebook
By: Maik Schmidt
ရေးသားတင်ဆက်သူ Hopeless Soul at 5:08 PM No comments:
Labels: Electronic, Free Ebooks
By: Joel Scambray, Vincent Liu, Caleb Sima
Download: Hacking Exposed Web Applications
Buy: Hacking Exposed Web Applications
Read: Hacking Exposed Web Applications
ရေးသားတင်ဆက်သူ Hopeless Soul at 3:24 PM No comments:
Wireless and Mobile Networks Security ebook
By: Hakima Chaouchi, Maryline Laurent-Maknavicius
Download: Wireless and Mobile Networks Security
Buy: Wireless and Mobile Networks Security
Read: Wireless and Mobile Networks Security
ရေးသားတင်ဆက်သူ Hopeless Soul at 3:07 PM No comments:
Download: Android Apps for Absolute Beginners, 2nd Edition
Buy: Android Apps for Absolute Beginners, 2nd Edition
ရေးသားတင်ဆက်သူ Hopeless Soul at 3:00 PM No comments:
Labels: Android Programming, Free Ebooks
By: Paulino Calderon Pale
Download: Nmap 6: Network Exploration and Security Auditing Cookbook
Buy: Nmap 6: Network Exploration and Security Auditing Cookbook
Read: Nmap 6: Network Exploration and Security Auditing Cookbook
ရေးသားတင်ဆက်သူ Hopeless Soul at 2:55 PM No comments:
The Business of Android Apps Development ebook
By: Mark Rollins
Download: The Business of Android Apps Development
Buy: The Business of Android Apps Development
Read: The Business of Android Apps Development
ရေးသားတင်ဆက်သူ Hopeless Soul at 2:50 PM No comments:
Netcat Starter:Learn to harness the power and versatility of Netcat
By: K.C. Yerrid
Download: Netcat Starter
Buy: Netcat Starter
Read: Netcat Starter
ရေးသားတင်ဆက်သူ Hopeless Soul at 2:47 PM No comments:
သြစတေးလျအစိုးရမှ မြန်မာကျောင်းသား အယောက်(၄၀) အား ပေးမည့် ပညာသင်ဆုအစီအစဉ်
၂၀၁၄ ပညာသင်နှစ် တွင် Australia Award Scholarship ပညာသင်ဆု အတွက် မြန်မာ နိုင်ငံသား ၄၀ ကျော် ခေါ်ယူမည် ဖြစ်ကြောင်း Aus AID က ထုတ်ပြန် ထားကြောင်း သိရသည်။ Australia Award Scholarship ( ယခင် Australian Development Scholarship ) နှင့်အတူ Australian Leadership Award Scholarship ကိုလည်း တစ်ပြိုင်နက် ခေါ်ယူ ထားကာ ပညာသင်ဆု လျှောက်လွှာ များကို မြန်မာ နိုင်ငံရှိ သြစတြေးလျ သံရုံးတွင် လာရောက် ဖြည့်စွက် နိုင်ပြီး လာမည့် ဧပြီ ၃၀ ရက်နေ့ နောက်ဆုံးထား တင်သွင်း ရမည် ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။
ပညာသင်ဆု များအနက် Australian Award Scholarship သည် သြစတြေးလျ နိုင်ငံတွင် ဘွဲ့ကြိုတန်း နှင့် ဂုဏ်ထူးတန်း တက်ရောက် မည့် သူတို့ အတွက်ဖြစ်ကာ Australian Leadership Award Scholarship သည် ကမ္ဘာတစ်ဝန်းရှီ ထူးချွန်သော ကျောင်းသား ၂၀၀ ကျော်ကို ခေါင်းဆောင်မှု စွမ်းရည် ဆိုင်ရာများ သင်ကြား ပေးသော သင်တန်းဖြစ်ပြီး လျှောက်ထား လိုသူ များသည် IELTS5နှင့် TOEFL 500 ရှိရန် လိုအပ်ကြောင်း သိရသည်။ အသေးစိတ် သိရှိလိုပါက www.ausaid.gov.au/australia-awards တွင် ၀င်ရောက် ကြည့်ရှုနိုင်ပြီး ရန်ကုန်မြို့ ကမ်းနားလမ်း ရှိ သြစတြေးလျ သံရုံး ဖုန်း ၀၁- ၂၅၁ ၈၁၀ လိုင်းခွဲ ၂၁၂ သို့ ဆက်သွယ် စုံစမ်း နိုင်ကြောင်း သိရှိရသည်။
ရေးသားတင်ဆက်သူ Hopeless Soul at 2:10 PM No comments:
Labels: စကောလားရှစ်, ပညာရေးသတင်း
GreenLandService App download
Download Myanmar Ebook ဒေါင်းလုပ် နည်း : မိမိဆွဲလိုရာ စာအုပ်(ebooks)များ ၏ Link ကို ကလစ်နှိပ်ပီး ဒေါင်းလုပ်ဆွဲယူနိုင်ပါသည်.......အောက်တ...
ဒီတံတားကြီးက ဆွီဒင် နိုင်ငံနဲ့ ဒိန်းမတ်နိုင်ငံကြား ဖောက်လုပ်ထားတဲ့တံတားကြီးဖြ စ်ပါတယ်။ အပေါ်စီးကနေ ကြည့်မယ်ဆိုရင် တံတားက ဆက်မနေဘဲ တစ်ဝက်တစ်...
Credit to orginal uploader www.khtnetpc.webs.com Download- ကိုယ်ကာယအလှကျင့်စဉ်
အေ ထွထွေ စာ အုပ်များ(ဟ င်းချက်နည်း ။စွယ်စုံကျမ်းနှင့်အခြား ဗဟုသုတဖြစ်ဖွယ် စာ အုပ်များ) လက်တွေ့သိပ္ပံနည်းကျလူကဲခတ်နည်း (ဦးစိန်မြင့်)...
ကားလမ်းမပေါ် ဖြတ်ပြီး တည်ဆောက်ထားသော လေဆိပ် အမှန်တကယ် ရှိပါတယ်။ တည်နေရာကတော့ လစ်ဘရိန်းပင်နီဆူလ ကျွန်းရဲ့ တောင်ဘက်စွန်း ရှိ ဗြိတိန်ပိုင် က...
အရပ်ပု၍စိတ်ညစ်နေသူများအတွက် အရပ်ရှည်နည်း စာအုပ်
အရပ်ပု၍စိတ်ညစ်နေသော သူများအတွက် ၁၄-ရက်အတွင်း အရပ်ရှည်နည်း စာအုပ်လေး မျှဝေပေးလိုက်ပါတယ်.. ကျနော်ဆက်နောင်လင်းဟန်ရဲ့ GreenL...
ကာယလေလေ့ကျင့် သူတိုင်း ကြောက်ကြ သည့် ဝေါဟာရတစ်ခုမှာ လေ့ကျင့်မှု့ လွန်ကဲခြင်း overtraining ဖြစ်သည်။သို့ သော်လည်း တစ်ခါတစ်ရံ မိမိတို့ စိတ်...
သင်္ကြန် တစ်ရက်အပြီး ပရိသတ်များ မှန်းထားသည့် အတိုင်း အဟော့ဆုံးဖြစ်ခဲ့တဲ့ နန်းသီရိမောင်
၂၀၁၃ ခုနှစ်ရဲ့ သင်္ကြန် တစ်ရက်အပြီးမှာတော့ ပရိသတ်များ မှန်းထားသည့် အတိုင်း အဟော့ဆုံးဖြစ်ခဲ့တဲ့ မော်ဒယ် ကတော့ နန်းသီရိမောင်ပဲ ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ ...
အလန်းလွန် အလွန်လန်းတဲ့ သင်္ကြန် အတက်နေ့ ပုံများ စုစည်းဖော်ပြမှု
ဆက်ရှိသေးပါသည် Read More ကိုနှိပ်ရန်...;-P ဆက်နောင်လင်းဟန်
android apps (3) Android Programming (4) Ebooksစုစည်းမှု (18) Electronic (1) Free Ebooks (31) Hacking Tut (4) PC Games Software (1) Web Design (3) ကာယဗလ (9) ကျန်းမာရေး (1) စကောလားရှစ် (2) ဓာတ်ပုံ (13) နည်းပညာ (2) ပညာရေးသတင်း (2) မြန်မာEbooks (23) သိုင်းပညာစာအုပ် (7) အထူးအဆန်းဖြစ်ရပ်မှန်သတင်း (30) အထွေထွေ (12)
Online Piano တီးချင်သူများအတွက်
Powered By Blogger | Template Created By ဆက်နောင်လင်းဟန်